नेपालमा परिवर्तनको नेतृत्व गगनले गर्नु पर्छ – Durbin Nepal News
नेपालमा परिवर्तनको नेतृत्व गगनले गर्नु पर्छ पुराना नेताहरूले अब देश हाँक्न सक्तैनन र उनीहरूले अविलम्ब अवकाश लिनु पर्छ
प्रा. डा. दुर्गा दाहाल २२ चैत्र २०७५, शुक्रबार २२:२९
साधारणतया चकमन्न अवस्थामा भूत निस्किन्छ भन्ने गरिन्छ । विशेष गरि अँध्यारो र एक्लै भएको स्थितिमा भूत भएको आभाष हुन्छ । मानिस भएको कोलाहलयुक्त र उज्यालो स्थानमा भूत निस्किएको थाहा छैन । भूत निस्किए पछिचैँ मानिसको भीड़ लाग्छ । तर आश्चर्यजनक ढंगले यही महिनाको दोश्रोताका अर्थात एप्रिल ९ तारीख क्यालिफोर्नियाको बे – एरियामा क़रीब बेलुकी सात बजेतिर उज्यालोमै भूत निस्किने अनुमान गरिएको छ र भूतविशेषज्ञ हरूको भनाई अनुसार यो अनुमान सत्य साबित हुनेछ ।
मेरो पनि उतिखेर कलेज पढदै गर्दा एकपटक भूतसंग साक्षात्कार र संवाद भएको थियो । राति “रामलीला” हेरेर आउँदै गर्दा घरको ढोकामा पुगि सकेपछि भूतसंग भेट भयो । बन्द ढोकालाई खोल्न लगाउन आमालाई बोलाऊँदा आमा नबोलेर भूत बोल्न थाल्यो । सँधै एकपटक बोलाउँदै बोल्ने आमालाई त्यो रात निकै निंद्रा लागेछ । कैयौँपटक बोलाउँदा पनि आमाले चाल पाउनु भएन । बरू भूतचैँ झन चर्किएर बोल्न थाल्यो । मेरो होस- हवास रहेन । भूतको र मेरो दूरी मुश्किलले २०० मीटर थियो होला । यो भूतको बारेमा म केही छिन पछि भन्ने छु ।
“ एकं सर्वगतं व्योम बहिरन्तर्यथा घटे
नित्यं निरंतरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा” ।। १-२० ।।
तात्पर्य: जसरी एउटै सर्वव्यापी आकाश घड़ाभन्दा भित्र वा बाहिर छ/ हुन्छ; त्यसरीनै सदैव विद्यमान रहने र गतिशील हुने ब्रह्म सदैव अस्तित्व शील रहन्छ ।
शिरमाथि हेर्दा देखिने विशालाकार शुन्य स्थानलाई हामी “ आकाश “ भन्ने गर्छौँ । शव्द र गुणयुक्त त्यो शुन्य अनंत अकाश जहाँ विश्वका सबै पदार्थहरू व्याप्त छन र जस्लाई पंचभूत हरूमध्ये एउटा तत्व मानिन्छ, त्यसलाइ “गगन” पनि भनिन्छ ।
सृष्टिको शुरूवात पंचतत्वहरू मिलेर भएको खगोलशास्त्री हरूको विश्वास छ । पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि र आकाश । मैले यहाँ गगनका बारेमा केही लेख्न गई रहेको छु । आकाश अर्थात “गगन” जस्का मुनि सारा विश्व अडिएको छ । नेपाल जस्तो सानो र सुन्दर मुलुक नअडिने कुरै भएन ।
नेपाल विश्वको मानचित्रमा एउटा सानो कनिका हो ।संसारका धेरै व्यक्तिहरूले नेपालको बारेमा जान्दैनन । किनभने, नेपालले आँफूलाई चिनाउने काम अद्यपरिमित गर्न सकेकै छैन । बरू भुईँचालोले विश्वसामु अलिकति चिनाएर गयो नेपाललाई । अब ‘सगरमाथा’ र ‘भगवानबुद्ध’ मार्फ़त नेपाललाई चिनाउने दिन गए । किनकि सगरमाथा प्रकृतिप्रदत्त ईश्वरीय वरदान हो हामीलाई र बुद्धलाई शुद्धोदनले जन्माएका थिए सिद्धार्थका नामले । प्रतीकका रूपमा लिन सकिन्छ तर यिनीहरू पनि भारतमै पर्छन भन्ने धेरै मानिसहरूको बुझाई छ । शायद, भारतले अलिबढी खोकेर होला ।
हामी नेपाली हरूले नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने खासै काम गरे जस्तो लाग्दैन मलाई । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पलाई समेत ‘नेपाल’ कहाँ पर्छ भन्ने थाहा रैन रहेछ भने Mr Smith, Ms Nancy, Mr John र Miss Shelly
को कुरा के गर्नु ?
हामी नेपालीहरूले अब इतिहास भट्ट्याएर हुन्न । भाषणबाज़ी पनि धेरै भयो नेपालमा । बिचरा फूलहरू, माला र खादाहरू धेरै संख्यामा शहीद भए । पुराना नेताहरूले अब देश हाँक्न सक्तैनन र उनीहरूले अविलम्ब अवकाश लिनु पर्छ । नयाँ पुस्तालाई आशीर्वाद दिएर अघि बढाउनु पर्छ ।
पुराना नेताहरूले ठूलो त्याग, तपस्या, बलिदान र कुर्वानी गरे । उहाँहरू अनुकरणीय र पूजित हुनुहुन्छ । हामी अनुगृहित हुनु पर्छ तर अब पुरानो पुस्ताबाट देश अघि बढ़नै सक्तैन । अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन हरूमा उहाँहरूको धोती फुस्किएको मैले कैयौँपटक देखि सकेको छु । नेपालको बदनाम भई सकेको छ अन्तराष्ट्रीय जगतमा नेपालका वर्तमान दिग्भ्रमित नेता र भ्रष्ट कर्मचारी हरूको कारणले गर्दा ।
अब पालो दिनु पर्छ गगनहरूलाई । नेपालको राजनैतिक गगनमा ‘गगन’ उज्याला नक्षत्र हुन । विद्यार्थी अवस्था देखिनै नेपाली जनतामा आशा र विश्वासको किरण छर्दै आएका उनी वर्तमान नेपालका भरपर्दा, कुशल र अब्बल दर्जाका नेता हुन । उनीप्रति जनआस्था, गहिरो विश्वास र सुप्त अवस्थामा रहेको नेपाली सपना छ । गगन स्वयं पनि केही गरेर देखाउन चाहन्छन । छोटो समयका लागि स्वास्थ्यमंत्री भएको अवस्थामा पनि गगनले नेपाली जनताका निम्ति उल्लेखनीय जनप्रिय कामहरू गरेर देखाएका छन । सरकारमा बस्दा होस अथवा प्रतिपक्षमा हुँदा होस, उनी जहिले पनि चर्चा र लोकप्रियताको उच्च शिखरमा रहि आएका छन ।
अब गगनले पंचतत्वको रूपमा रहेर नेपाललाई नयाँ दिशाबोध, निर्देशन, गति, प्रगति र उर्जा दिनु पर्छ । नेपाली युवा र समयको माँगलाई बुझ्नु पर्छ । आँफू पंचतत्व हरूमध्ये एक भएर अरू चार तत्वहरू: पृथ्वी, वायु, जल र अग्निको मुख्य सहारा र मज़बूत संगठनले “परिवर्तित नेपाल” को अनुभूति दिनु पर्छ नेपाली जनतालाई ।
अन्य चार तत्वहरूमा विश्व, धनराज, गुरूराज, सुनील र मणिकर्णिकालाई लिन सकिन्छ । विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दा दिँदैनन भने विद्रोह पनि गर्न जान्नु पर्छ युवापुस्ताले । पुराना नेताहरूले अभिभावकीय भूमिकामा रहि नयाँ नेतृत्वलाई सल्लाह दिऊन मागेका खण्डमा तर बलपूर्वक सत्ता र शक्तिमा बस्नु किमार्थ सुहाउँदैन बुढाहरूलाई । उनीहरू सम्मानयोग्य होलान तर नेतृत्वदायी छैनन अब । हग्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज भई सक्यो बाबा ठाकुरे !
अमेरिकाको बोस्टन शहरको विश्वविख्यात हार्वर्ड केनेडी स्कूलमा सम्पन्न “Leadership & public policy for the 21st century” नामक अन्तराष्ट्रीय गोष्ठीमा भाग लिन आएका गगन अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विभिन्न ठाऊँहरूमा आफ्ना विचार, भावना, अनुभव र भावी योजनाहरू शेयर गर्दै हिंडेका छन ।
यसै क्रममा, हिन्दु दर्शनमा वर्णित सृष्टिका पंचभूत ( पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि र गगन ) हरूमध्ये एउटा बलिया भूत स्वनामधन्य “गगन थापा” ज्यू यही एप्रिल ९ तारीख़ क्यालिफोर्नियाको बे- एरियामा आउने खबरले डर र हर्षको माहौल घनीभूत हुँदै आएको छ । तटस्थवादी हरूलाई डर र परिवर्तनकामी हरूलाई हर्ष लागेको छ ।
परिवर्तन अवश्यंभावी छ । नेपालमा पनि निकट भविष्यमा व्यापक र अभूतपूर्व परिवर्तन भएरै छाडछ तर अबको नेपालको मुख्य नेतृत्व गगनले लिनु पर्छ ।
निर्भीक र निश्चल गगन बन्धुलाई क्यालिफोर्नियाको बे- एरियामा आन्तरिक अभिनन्दन र हार्दिक स्वागत छ ।
मैले उहिल्यै कलेज पढदा भेटेको भूतचैँ मेरो मनभित्रको ‘भूत’ रहेछ । हाम्रो घरको छेउमै हाम्रा ‘ बा’ ले बनाएको एउटा पानीको इनार पनि थियो । मेरो “आमा” भन्ने प्रिय आवाज़ त्यही इनारभित्र प्रतिध्वनित भएको रहेछ । धेरै अनुसंधान पश्चात उतिखेरको यो डरपोक बाहुनलाई थाहा लागेको थियो ।
( प्रा. डा. दुर्गा दाहाल राजनैतिक विश्लेषक, कांग्रेसका प्राक्तन केन्द्रीय प्रशिक्षक र नेजस अमेरिकाका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ )
२२ चैत्र २०७५, शुक्रबार २२:२९ मा प्रकाशित